Mayelana NATHI - Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd.
I-Hebei Tailian Fastener Ukukhiqiza Co., Ltd.itholakala esifundeni saseYongnian, eHandan City, isikhungo sokusabalalisa izingxenye zokukhiqiza ezijwayelekile kunazo zonke eChina. Le nkampani ineqoqo eliphelele lokucubungula nokukhiqiza ubuchwepheshe bama-anchor bolts, izindlela zokuhlola eziphelele nobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile, futhi isebenzisa insizakalo yesimo sezulu sonke. Eyasungulwa ngonyaka ka-2000, inkampani ihlanganisa indawo engaphezu kwama-200 mu futhi inenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-120 million yuan.
Le nkampani njengamanje inabaphathi, ochwepheshe kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-300 enkampanini yokukhiqiza, ihlukaniswe yaba yiminyango emine emikhulu: umnyango wezokuthengisa, isikhungo esilawula izinto ezibonakalayo, umnyango wezobuchwepheshe bokukhiqiza, umnyango wezokuphatha nowezabasebenzi nowezimali. Umnyango wezokuthengisa uqukethe ukwahlukaniswa kwamandla, uphiko lwezinto zokuhamba, uphiko lwe-photovoltaic neminye iminyango. Kukhona ihhovisi leTibet, ihhovisi laseGuangxi nehhovisi laseGuangdong. Inkampani iwusebenzise ngokuphelele umqondo wokuphatha wezinto ezintsha zesayensi nezobuchwepheshe nentuthuko esimeme, ngokuya ngenqubomgomo yentuthuko yokwethembeka nekhwalithi kuqala. Igcine isheya lemakethe eliphakeme kakhulu emakethe yomkhiqizo kazwelonke i-Jiaoan futhi ibambe iqhaza ekunikezelweni kwamaphrojekthi wejubane angaphezulu kuka-200 kazwelonke afana neBeijing, Hong Kong, Macao, Guangdong, Beijing, Kunming, Qingdao, Beijing, Shanghai futhi Guangdong. Selokhu yasungulwa, inkampani ibilokhu igcine izinga lokuphasa lomkhiqizo elingaphezu kwama-90% kusampuli yekhwalithi yomkhiqizo yoMnyango Wezikhungo Zokuhlolwa Kwezokuxhumana kanye neSikhungo Sokuhlola Ikhwalithi Yengoma.
Inhloso yethu "ukusinda ngekhwalithi, ukuthuthukisa ngedumela, ukuzuza ngokusevisa, nokubeka abasebenzisi phambili", nokuhlela ukukhiqizwa ngokuhambisana nezindinganiso zikazwelonke nezidingo zomsebenzisi. Ngitshala ngemishini esezingeni eliphakeme nephelele, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, imikhiqizo ithengisa kahle ezweni lonke, iphumelele ukwethenjwa nokudunyiswa kwabasebenzisi, ukukhetha kweTailian Fastener Co, Ltd. imikhiqizo ilingana nokukhetha isiqinisekiso esinokwethenjelwa samaphrojekthi wokwakha ! I-Tylenol Fasteners izokunikeza insizakalo eqotho kuyo yonke inqubo.
Ifektri yethu igxile ekukhiqizeni: umshudo wesikebhe, umshudo wesitadi, i-U-bolt, i-U-hoop, insimbi yensimbi, umshudo wensimbi, isipikili se-cylindrical welding, ibhawodi elishisayo, insimbi yombhoshongo wensimbi, isikulufa sokwakha, i-bolt bolt, insimbi efakiwe ipuleti, imishudo yezimayini, uchungechunge lwamantongomane, izingxenye ezimise okhethekile, njll. Inkampani yethu ineminyaka eminingi yentuthuko ocwaningweni nasekuqiniseni, ukukhiqiza, ukuthengisa nokusebenza, futhi inqwabelene nesipiliyoni esicebile ekukhiqizeni ihange le-bolt, kwakheka iqembu lonjiniyela ochwepheshe ababandakanyeka ekwakhiweni kwe-anchor bolt kanye nasekukhiqizeni nakubachwepheshe abaphambili abanolwazi. Ngokujula komnotho wezimakethe kanye nenqubekela phambili eqhubekayo yokucubungula ubuchwepheshe, ubuchwepheshe nokulungiswa kwemishini yefektri yethu kuyashintsha usuku ngalunye oludlulayo, futhi isikali sayo sokukhiqiza sikhula kancane kancane. Isungule ibhizinisi lokucubungula insimbi elikhulu kakhulu elihlanganisa ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukukhiqizwa, ukugcinwa kanye nokucubungula amabhawodi esisekelo, izesekeli zezimboni nezimayini kanye nemikhiqizo yochungechunge lwezesekeli, ngomthamo wonyaka wokukhiqiza wokukhiqiza wamathani ayi-50000 kanye nenani lonyaka lokukhipha cishe Ama-yuan ayizigidi ezingama-500. Le nkampani inamasifundisane amakhulu wokukhiqiza wesimanje nemishini yokusekela esekelayo kanye nesethi ephelele yemishini yokuhlola. Yamukela izinto ezisezingeni eliphakeme ezisuselwa emigodini emikhulu yensimbi emabhizinisini amakhulu akhiqiza insimbi kazwelonke nezifunda, futhi iqinisekisa ikhwalithi yezinto ngenkathi ilawula ngokuqinile ikhwalithi. Le nkampani isidlulile isitifiketi sokuphathwa kohlelo lwe-ISO9001.